Typhoid Fever (အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ) - Hello Sayarwon
Phyo Wai Yan မှ ရေးသားသည်။ 13/12/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ ဆိုတာ Salmonella typhi (သို့) Salmonella paratyphi ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော ဖျားနာခြင်း ၊ နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ပိုးရှိသူထိတွေ့ထားသော အစားအစာနဲ့ ရေတွေမှာ အထက်ပါ ဘက်တီးရီးယားများကို တွေ့နိုင်ပြီး အခြားသောလူများကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ က ဖွံ့ဖြိုးဆဲ တိုင်းပြည်များ (အထူးသဖြင့် ကလေးများ) တွင် အဖြစ်များပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ အဖြစ်များသော်လည်း အသက်အရွယ်မရွေး ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိပါတယ်။
ရောဂါကူးစက်ခံရပြီး ၁ပတ်ကနေ ၃ပတ်အတွင်း အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
• အဖျားက နေ့စဉ် တက်တက်လာခြင်း၊ 104.9 F ( 40.5 C) ထိ တက်နိုင်ပါတယ်
• အားနည်းခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း
• ကိုယ်လက် ကိုက်ခဲခြင်း
• အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း
• ဝမ်းသွားခြင်း(သို့) ဝမ်းချုပ်ခြင်း
• အဖုအပိမ့်များ ထွက်ခြင်း
• ဗိုက်အလွန်အမင်း ဖောင်းလာခြင်း
Salmonella typhi ပိုးရှိသော ရေနဲ့ အစားအစာများကို စားသောက်ခြင်းကြောင့် အူရောင်ငန်းဖျားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အူရောင်ငန်းဖျားဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်မားစေတဲ့ အရာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
• အိန္ဒိယ၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ အာဖရိက၊ တောင်အမေရိကနဲ့ အခြားသောနေရာများကဲ့သို့သော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနေရာတွေမှာ နေထိုင်ခြင်း
• အူရောင်ငန်းဖျား ဖြစ်ပွားနေသော နေရာများသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ခြင်း
• အူရောင်ငန်းဖျားဖြစ်ပွားနေသောသူနှင့် မကြာခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော သူများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် နေခြင်း
အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါလက္ခဏာ၊ ဆေးစစ်ချက်နဲ့ ဘယ်နေရာတွေကို ခရီးသွားခဲ့လဲဆိုတာကို မူတည်ပြီး စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
အတည်ပြုဖို့ ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ သွေး၊ ဝမ်းတို့မှ Salmonella typhi ကို ပိုးမွေးပြီး ရောဂါရှာဖွေပါတယ်။ လိုအပ်ရင် အူရောင်ငန်းဖျား DNA အတွက် ပဋိဓာတ် ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
အူရောင်ငန်းဖျားကို ထိရောက်စွာ ကုသတဲ့ တစ်ခုတည်းသောနည်းက ပိုးသတ်ဆေးပေးခြင်းပါပဲ။ သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေး စသဖြင့် လူနာပေါ် မူတည်ပြီး ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပိုးသတ်ဆေးတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆေးပတ်လည်အောင် သောက်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာတွေ သက်သာအောင်
ကြာရှည်စွာဖြစ်နေသော အဖျားနှင့် ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ကြောင့် ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ရေများများ သောက်ပေးခြင်း
အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါဟာ အစားအသောက်ကနေ ကူးစက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် တတ်နိုင်သမျှ အစားအသောက်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်ဖို့၊ အစာမစားခင် လက်ဆေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါက အစားအသောက်ကနေတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းတာက ပိုးသတ်ဆေးတွေပေးပြီး ကုသနိုင်သလို အစားအသောက်တွေ သန့်ရှင်းအောင် ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
. Accessed June, 13, 2016.
http://www.webmd.com/a-to- z-guides/typhoid- fever.
Accessed June, 13, 2016.Typhoid fever.
Accessed June, 13, 2016.
Pseudomembranous Colitis (ပိုးသတ်ဆေးကြောင့် အူရောင်ခြင်း)